June 2020 – " कञ्चनजंगा News "
काठमाडौँ उपत्यका प्रवेशमा सहज बनाउन निर्देश
No Comments on काठमाडौँ उपत्यका प्रवेशमा सहज बनाउन निर्देश
राष्ट्रियसभा, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले काठमाडौँ उपत्यका प्रवेशमा सरलीकृत गर्न सरकारलाई निर्देश गरेको छ । कोभिड–१९ को सङ्क्रमण रोकथाम, उपचार, क्वारेन्टिन र आइसोलेसनको अवस्थाबारे सरकारसँग जानकारी लिएपछि समितिले उपत्यका प्रवेश नाकामा सर्वसाधारणले सास्ती खेप्नु परेको जनाउँदै आवश्यकता र औचित्यका आधारमा सरलीकृत व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको सभापति दिलकुमारी रावलले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा कोभिड–१९ को सङ्क्रमण जोखिम नियन्त्रण र रोकथाम गर्न उपत्यका प्रवेश नाकामा आजैदेखि केही कडाइ गर्ने घोषणा गरेको थियो । अत्यावश्यक काम विशेषले उपत्यका आउनै पर्ने पेशा व्यवसायी तथा बिरामी र उनका आफन्तसमेत यस किसिमको कडाइको मारमा परेको जनाउँदै जिल्ला प्रशासन तथा स्थानीय तहबाट पास लिएर आउनु भने निर्णय व्यवहारिक नभएकाले त्यसलाई सच्याउन समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।
सरकारको पछिल्लो निर्णयपछि बाहिरबाट काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश गर्ने क्रममा रहेका नागरिकले साँगा र नागढुङ्गामा अनावश्यक झण्झट र दुःख व्यहोर्नु परेको समितिको ठहर रहेको छ । पास लिएर आउने भन्ने कुरा पहुँच भएका व्यक्तिका लागि मात्र सम्भव भए पनि सर्वसाधारणका लागि व्यावहारिक नभएकाले निर्णय सच्याउन आवश्यक रहेको सभापति रावलले बताउनुभयो ।
विभिन्न स्थानीय तहमा सञ्चालनमा रहेका क्वारेन्टिन तोकिएको मापदण्डअनुरुप सञ्चालन भए नभएको निरन्तर अनुगमन र निरीक्षण गर्न तथा क्वारेन्टिन सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहलाई आवश्यकता र औचित्यका आधारमा थप रकम उपलब्ध गराउन पनि समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । बैठकमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्र (सिसिएमसी)को मूल्याङ्कन प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले क्वारेन्टिनलाई आवश्यक पर्ने बजेट उपलब्ध गराइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
No Comments on आफ्नो फोक्सो ७२ घण्टामा आफैं यसरी सफा गर्नुहोस्, पढौं र जानकारीको लागी सेयर गरौं…
आफ्नो फोक्सो ७२ घण्टामा आफैं यसरी सफा गर्नुहोस्, पढौं र जानकारीको लागी सेयर गरौंचुरोट खानेलाई मात्रै होइन अन्य मानिसलाई पनि फोक्सोको समस्या हुनेगर्दछ । यदि तपाईले चुरोट खानुहुन्छ भने फोक्सो अवश्य खराब हुन्छ । तर घरेलु विधि प्रयोग गरेर ७२ घण्टाभित्र आफ्नो फोक्सो सफा गर्न सक्नुहुन्छ । यस्तो विधि सुरु गर्नुभन्दा पहिला दुग्धजन्य पदार्थहरुलाई आफ्नो भोजनबाट टाढा राख्नुहोला । यो निकै महत्वपूर्ण कुरा हो किनभने दुग्धजन्य पदार्थको सेवनले गर्दा फोक्सोमा भएका विषाक्त तत्वहरुलाई बाहिर फाल्न शरीरलाई गाह्रो पर्छ । घरेलु विधि प्रयोग गर्ने तरीकाः
याे पनि पढ्नुहाेस्- गाईको गहुँतबाट १४८ प्रकारका रोग निको हुन्छ: रुसी वैज्ञानिकको निश्कर्षस्थानीय गाईको गहुँतबाट १४८ प्रकारका रोग निको हुने वैज्ञानिक अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको छ । गाईको घ्यूले बढेको कोलेस्टोरल ठीक गराउँछ । गोरस मुटुरोगमा समेत लाभदायक रहेको तथ्य वैज्ञानिक अनुसन्धानबाट प्रमाणित भएको छ । रुसी वैज्ञानिक शिरोबीचले मानिसमा हुने रेडियोधर्मी कणको प्रभाव नष्ट गर्ने क्षमता गाईको दूध, दही, घ्यू, गहुँत र गोबरमा हुने अनुसन्धानबाट पत्ता लगाउनुभयो । सन् २०१२ मा अमेरिकन हर्ट एशोसिएशनले स्थानीय गाईको दही सेवन गर्नाले उच्च रक्तचापका रोगीमा ३१ प्रतिशतले कमी आएको तथ्य सार्वजनिक
शास्त्र भन्छ – राती यस्ता काम गरे घरमा लक्ष्मीकाे बास हुन्छ !
No Comments on शास्त्र भन्छ – राती यस्ता काम गरे घरमा लक्ष्मीकाे बास हुन्छ !
मानिसहरुले गर्नुपर्ने नित्य कर्मका बारेमा शास्त्रले नै उल्लेख गरेको पाइन्छ। हामीले मात्र अनुसरण गरे दैनिक जीवन सहज हुन्छ। जोतिषशास्त्रलाई मान्ने हो भने रातिको समयमा पनि केही त्यस्ता काम गर्नुपर्छ जसले तपाईको घरमा सुख, शान्ति र समृद्धि छाउँछ । त्यस्तै यस्ता कामलाई नियमवद्ध अपनाउनाले घरमा सदैव लक्ष्मीको बास हुन्छ।
राति घरको दक्षिण र पश्चिम कुनामा बत्ती वा बल्ब बाल्नाले पितृको आत्माले शान्ति पाउँछ र घरमा सम्पन्नता छाउँछ।पूजा घर वा देव स्थानमा राति दियो बाल्नाले घरमा लक्ष्मीको बास रहन्छ। धनकी देवी लक्ष्मी प्रशन्न हुने विश्वास गरिन्छ। सुत्नुभन्दा पहिला आफ्नो गोडा धुनपर्छ, यसो गर्नाले राम्रो निद्रा आउँछ र निद्रा राम्रो परेपछि स्वास्थ्यमा आउने समस्या समेत दूर हुन्छ।
सुतेको बेलामा आफ्नो खुट्टालाई उत्तरी दिशातर्फ पार्नुहोस्। यसो गर्नाले शरीर र घरमा समेत नकरात्मक उर्जा आउन पाउँदैन। सुत्ने कोठामा कपूर बाल्नाले सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हुन्छ र पति पत्निबीचको सम्बन्ध समेत सुमधुर बन्छ।
शास्त्र भन्छ – महिलाहरूले राती यस्ता काम गरे घरमा लक्ष्मीकाे बास हुन्छ !
– राती सुत्नुअघि भान्छामा एक बाल्टी पानी भरेर राख्नुहोस् । यसले घरमा सुख–समृद्धिको बास गराउँछ । खाली बाल्टी राख्नुले घरमा चिन्ता भर्ने काम गर्छ।
भगवान् शिवको जन्म कसरी भयो ? यस्ता छन् ५ मान्यता !
No Comments on भगवान् शिवको जन्म कसरी भयो ? यस्ता छन् ५ मान्यता !
शिव हिन्दु धर्मका प्रमुख देवताहरू मध्ये एक हुन् । भगवानको तीन रूपहरू मध्येको एक शिवलाई विनाशकर्ताका रूपले चिनिन्छ । हिन्दु धर्मका विभिन्न सम्प्रदायहरू मध्ये शैव सम्प्रदायका अनुयायीहरू शिवलाई आफ्नो प्रमुख देवता मान्छन् र त्यसै अनुसार उनलाई महादेव, परमेश्वर आदि नामले सम्बोधन गर्दछन् ।
शिवलाई प्रायजसो शिव लि’ङ्गको रूपमा पनि पुज्ने गरिन्छ । तर, भगवान् शिव जन्मिएका होइनन् प्रकट भएका हुन् भन्ने मान्यता रहिआएको छ, जुन सायदैलाई मात्र थाहा हुन् सक्दछ पुराणहरूमा भगवान् शिवको उत्पत्ति बारेको केही प्रसंगहरु पाइन्छ ।
हिन्दु धर्मग्रन्थ विष्णु पुराणका अनुसार, भगवान् ब्रह्मा, भगवान् विष्णुको नाभि(ना’इटो) कमलबाट उत्पत्ति भएका हुन् भने भगवान् शिव विष्णुको शिरको तेजबाट उत्पन्न भएका हुन् । जसकारण उनी सधैँ योगमुद्रामा रहन्छन् ।
एक पटक जब भगवान् विष्णु र ब्रह्मा अहं’कारमा परेर आफूलाई श्रेष्ठ बताउँदै झ’गडा गर्न थाले तब बलिरहेको एक खम्बाबाट भगवान् शिव प्रकट भएका थिए ।
एक कथा वर्णन गरिएको पाइन्छ । जस अनुसार ब्रह्मालाई एक बालकको आवश्यकता थियो । जसकारण उनले तपस्या गरे । तब अचानक ब्रह्माको काखमा एक बालक प्रकट भए । जो रुँदै थियो । जब सो बालकलाई ब्रह्माले रुनुको कारण सोधे । तब त्यो बालकले आफ्नो नाम नभएका कारण रोए*को बताए ।
त्यसपछि भगवान् ब्रह्माले उक्त बालकको नाम ‘रुद्र’ राखे जसको अर्थ हुन्छ ‘रुनेवाला’ । भगवान् ब्रह्माले सो नाम दिएर पनि शिवजी चुप लागेनन् त्यस पश्चात् ब्रह्माले बालकलाई चुप राख्न ८ नाम भने । रुद्र, शर्व, भाव, उ*ग्र, भीम, पशुपति, ईशान र महादेव । जसलाई पृथ्वीमा लेखिएको मान्यता छ ।
उनलाई एक बच्चाको आवश्यक पर्‍यो तब उनले भगवान् शिवले दिएको आशीर्वाद सम्झिए । त्यसपछि ब्रह्माले तपस्याको माध्यमबाट बालक शिवलाई बच्चाको रूपमा आफ्नो काखमा पाए
भगवान् शिवले ब्रह्माको पुत्रका रूपमा जन्म लिनुको पछाडि पनि विष्णु पुराणमा एक पौराणिक कथा छ । जसका अनुसार जब धरती, आकाश, पाताल समेत पूरा ब्रह्माण्ड जलमग्न थियो तब ब्रह्मा, विष्णु र शिव बाहेक अरू कोही पनि देव या प्राणी थिएनन् । तब केवल विष्णु मात्र जलको सतहमा आफ्नो शेषनागमा बसेका हुन्थे ।
तब उनको ना*इटोबाट कमलको डाठमा भगवान् ब्रह्मा प्रकट भए । ब्रह्मा–विष्णु जब सृष्टिको सम्बन्धमा कुरा गरिरहेका थिए तब शिव प्रकट भए । तर, ब्रह्माले उनलाई चिन्न अस्वीकार गरे। तब विष्णुले ब्रह्मालाई दिव्य दृष्टि दिएर शिवबारे याद दिलाए । त्यस पश्चात् भगवान् ब्रह्माले आफ्नो गल्ती महसुस गर्दै भगवान् शिवसँग क्षमा माग्न थाले र शिवसँग पुत्रको रूपमा जन्म लिने आशीर्वाद माग्न थाले ।
मनकामना मन्दिरको दर्शन गरि वि.सं.२०७७ साल आषाढ १७ गतेको राशिफल हेर्नुहोस् , मनकामना माताले हामी सबैको रक्षा गरुन
No Comments on मनकामना मन्दिरको दर्शन गरि वि.सं.२०७७ साल आषाढ १७ गतेको राशिफल हेर्नुहोस् , मनकामना माताले हामी सबैको रक्षा गरुन
वि.सं.२०७७ साल आषाढ १७ गते । बुधबार । ईश्वी सन् २०२० जुलाई ०१ तारिख । नेपाल संवत् ११४० प्रमादी संवत्सर उत्तरायन ग्रीष्म ऋतु श्रीशाके १९४२ । जेष्ठ आषाढ शुक्लपक्ष । तिथि– एकादशी,२९ घडी ०२ पला,बेलुकी ०४ बजेर ५० मिनेट उप्रान्त द्वादशी नक्षत्र–विशाखा,५३ घडी ३२ पला,रातको ०२ बजेर ३८ मिनेट उप्रान्त अनुराधा । योग– सिद्ध,१६ घडी ४७ पला,बिहान ११ बजेर ५६ मिनेट उप्रान्त साध्य करणवणिज,बिहान ०५ बजेर ५९ मिनेट उप्रान्त भद्रा,बेलुकी ०५ बजेर ५० मिनेट उप्रान्त बव । आनन्दादिमा– धाता योग । । चन्द्रराशि तुला,बेलुकी ०८ बजेर ५९ मिनेट उप्रान्त बृश्चिक । काठमाडौंमा सूर्योदय ०५ बजेर १३ मिनेट,सूर्यास्त बेलुकी ०७ बजेर ०१ मिनेट । दिनमान ३४ घडी ३१ पला हरिशयनी एकादशी व्रत। तुलसी रोपण। चतुर्मास व्रत प्रारम्भ।
बिद्या तथा प्रतिष्पर्धामा प्रतिष्पर्धिहरुलाई उछिन्दै नतिजा आफ्नो पोल्टोमा पार्न सकिनेछ । माया प्रेममा रमाउन चाहनेहरुका लागि समयले साध दिनेछ भने आफन्तजन सँग बिग्रिएको सम्बन्धमा सुधार आउनेछ । मामा तथा मावली पक्षबाट पनि अपेक्षा अनुसारको सहयोग पाईने योग रहेकोछ । तरपनि वाहिरी वातावरण तथा सरसफाईमा ध्यान दिनुहोला ।
पढाई लेखाईमा अरुदिन भन्दा राम्रो प्रगति भएर जानेछ भने प्रतिश्पर्धामा तपाईनै अग्र पंक्तिमा आउनु हुनेछ । आफ्नो क्षेत्रमा प्रभुत्व जमाउँन सकिनेछ भने तपाईको कार्य शैलिको सबैले समर्थन गर्नेछन् । प्रेम प्रशङगका कोपिलाहरु फक्रियर जानेछन् । तरपनि समय प्रतिकुल रहेकोले सरसफाईमा ध्यान दिनुहोला । अत्यावस्यक काममा बाहेक यात्रा नगर्नुहोला ।
व्यापार व्यावसायमा लगानि गरे पति चाहेजस्तो उपलब्धि हासिल गर्न सकिने छैन । राजनीति तथा समाजसेवामा प्रतिष्पर्धिहरु नै भन्दा पछि परिने हुनाले पद प्राप्तीको योग टरेर जानेछ । तपाईले बनाएका गोप्य योजनाहरु सार्वजनिक गर्न केहि समय पर्खदा राम्रो हुनेछ भने तपाईले शुरु गर्नुभएको काममा बिभिन्न बाधा तथा अवरोधहरुबको सामना गर्नुपर्नेछ ।
प्रेम प्रशङगमा रमाउने समय रहेको छ भने एक आपसमा भेटघाट गरि मिठा मिठा कुरा गरि दिन बिताउन सकिनेछ । बादबिवाद तथा प्रतिस्पर्धामा तपाईकै जित हुनेछ भने न्यालयबाट हुने न्यायिक निर्णयहरु तपाईकै पक्षमा हुनेछन् । सार्वजनिक महत्वको बिषय उठान गर्दा दाजुभाई तथा छिमेकिसँग परामर्श लिएर अगाडि बढ्दा कामहरु समयमानै फत्ते हुनेछन् ।
पढाई लेखाईमा भनेजस्तो नतिजाको आउने हुनाले मन प्रशन्न रहनेछ । साथिभाई तथा आफन्तका साथ रमाईलो जमघट हुने तथा स्वादिष्ट भोजनका साथ दिन बिताउन सकिनेछ । अग्रजहरुबाट सुनिने शुभ समाचारले मन उत्साहित बनाउनेछ । सामाजिक सञ्जाल तथा प्रविधिको प्रयोग मार्फत आफ्ना विचारहरु जनमानसमा लैजान सकिनेछ ।
राम्रा पहिरनले अरुको मन आफुतिर लोभ्याउन सकिनेछ । नया प्रबिधिको प्रयोग मार्फत आफुलाई अब्बल साबित गर्न सकिनेछ । नयाँ प्रकृतिको काम थालनि गरि मनग्गे आम्दानि गर्न सकिनेछ । परिवारका साथ मिष्टान्न भोजनका साथ समय व्यातित गर्न सकिनेछ । धर्म तथा यस्तै कार्यक्रममा सहभागि हुने अवसर जुर्नेछ ।
पढाई लेखाईमा सन्तोषजनक सुधार भएर जानेछ भने प्रतिश्पर्धामा अलि बढि मेहनेत गर्दा प्रतिश्पर्धिहरुलाई हराउँन सकिनेछ । अनाबस्यक ठाउँमा श्रम तथा शक्ति प्रयोग हुनेछ ध्यान दिनुहोला । आफन्त तथा घर परिवारका मानिस सँग बिवाद बढ्नेछ भने बिश्वास गरेकाहरु बाटनै धोका हुनेछ ।
दाजुभाई तथा बुवाबाट आर्थिक सहयोग पाईने हुँदा मन प्रशन्न रहनेछ । ईच्छा, आकांक्षा तथा मनोकामना पुरा गर्न बढिनै समय मेहनेत गर्नुपर्नेछ । माया प्रेममा एक अर्कालाई अबिश्वास गर्नाले नचाहादा नचाहादै टाडिनुपर्ने बाध्यता आउँनेछ । सामाजिक सञ्जाल तथा प्रविधिको प्रयोग मार्फत आफ्ना विचारहरु जनमानसमा लैजान सकिनेछ ।
पढाई लेखाईमा उत्कृष्ट नतिजा ल्याई पुरस्किृत हुँने समय रहेकोछ भने पारिवारिक जमघटमा सहभागि भई स्वादिष्ट भोजन भोजन ग्रहण गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । प्रसाशनिक क्षेत्रमा सामेल भई सामाजिक काम गर्ने अवसर प्राप्त हुँँने हुँदा मान सम्मान तथा ईज्जत प्रतिष्ठामा बृद्धि भएर जानेछ । तरपनि वाहिरी वातावरण तथा सरसफाईमा ध्यान दिनुहोला ।
सिर्जनात्मक तथा लेखन शैलिमा बिकास हुनेछ भने अध्ययन अध्यापनमा बिजयको योग रहेकोछ । आफ्ना गुरु तथा अग्रजहरुको आशिर्बाद पाईने हुदा मनमा एक किसिमको उमङग पैदा हुनेछ । साथभाईको सहयोगले राम्रा तथा परिणाममुखि काम गर्न सकिनेछ । आफ्नो सस्कार तथा सस्कृतीको जगेर्ना गर्ने काममा समय दिनु पर्नेछ ।
माया प्रेममा धोका हुन सक्छ भने घर परिवारमा तथा पति पत्नी बिच मनमुटाब बढ्नेछ । ऋण,रोग तथा संकटको सामना गर्नुपर्नेछ भने तपाईको काममा अप्ठ्यारा परिस्थितिहरु सिर्जना हुनेछन् । गोप्य कुराहरु बाहिर आउन सक्छन् ध्यान दिएर काम गर्नुहोला । धन सम्पति तथा अचल सम्पति हराउन तथा लुटिन सक्छ सजक रहनुहोला । नयाँ काम शुरु गर्नु भन्दा गरिरहेको कामलाई निरन्तरता दिन सकिनेछ ।तपाईको दिन शुभ रहोस् ।ज्योतिषी तारानाथ भण्डारी ।
काठमाडौंका यी स्थानमा बुधबार बत्ती जाने
No Comments on काठमाडौंका यी स्थानमा बुधबार बत्ती जाने
काठमाडौं ।बुधबार चक्रपथ क्षेत्र वरिपरि विद्युत सेवा अवरुद्ध हुने भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार चक्रपथ विस्तारको काम गर्नुपर्ने भएकाले विद्युत सेवा अवरुद्ध हुन लागेको हो ।
कुलेश्वर वितरण केन्द्रअन्तर्गतको कलंकीदेखि ढुंगेधारासम्मको चक्रपथ विस्तार कार्यको लागि सडकको दायाँ बायाँको विद्युतीय संरचना ९ एचटीएलटी लाइन ० स्थानान्तरण हुनेछ । जसका कारण स्वीचाटार पुलबाट सितापाइला चोकसम्मको ११ केभी लाइन चार्ज गर्नु पर्ने भएकोले बुधवार विहान ११ बजेबाट साँझ ५ बजेसम्म लाइन सट डाउन गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
उक्त फिडरअन्तर्गत सितापाइला, बुढाथोकी कोल्ड स्टोर ,मुसलवान टोल, बुढानिलकण्ठ मन्दिर, टेम्पो पार्क, सिभिल होम्स, टौखेल, अलाकत्रा फेक्ट्री, थापाचोक, रामकोट, आदेश्वर, छत्रेदेउराली लगायत क्षेत्रमा बत्ति जाने छ ।
मर्मतको काम निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्नेछ । साथै नयाँ लाइन चालु गरीने स्थान स्वीचाटार पुलदेखि सितापाइला चोकसम्मा सडकका दायाँ बायाँ निर्माण भएका विदुतिय स‌‌‍रचनाहरुको नजिक नजान तथा नछुन समेत प्राधिकरणले आग्रह गरेको छ ।
काठमाडौंको आकाशमा देखियो सलह
No Comments on काठमाडौंको आकाशमा देखियो सलह
?kGb]xL, !# c;f/M a'6jndf zlgaf/ b]lvPsf] ;nx ls/f . t:jL/ M lg/f uf}td÷/f;;
काठमाडौं– काठमाडौमा पनि सलह देखिएको छ । मंगलबार अपराह्न काठमाडौंको आकाशमा सलहको झुण्ड देखा परेको हो ।
काठमाडौंको लैनचौर क्षेत्रमा आकाशमा सलहको ठूलो झुण्ड देखिएको स्थानीयले बताएका हुन् । यसैगरी काठमाडौंको वनस्थली, नागार्जुन र रानीवन क्षेत्रमा पनि सलह देखिएको स्थानीयले बताएका छन्।
देशैभरको सलहको विश्लेषण गरिरहेको प्राविधिक कार्यदलले काठमाडौंमा दक्षिणतर्फबाट ठूलो संख्यामा सलह प्रवेश गरेको पुष्टि गरेको हो ।
काठमाडौंको दक्षिण क्षेत्रबाट स्वयम्भू हुँदै नागर्जुनतर्फ सलहको ठूलो झुण्ड प्रवेश गरेको प्राविधिक कार्यदलका संयोजक सहदेव हुमागाइँले बताए ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि, के मा कति बढ्यो ? (बिगेप्ति सहित)
No Comments on पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि, के मा कति बढ्यो ? (बिगेप्ति सहित)
काठमाडौं– नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ।
निगमले पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ तथा डिजेल र मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर २ रुपैयाँ बढाएको हो। बढेकाे मूल्य मंगलबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने निगमले जनाएको छ ।
अब काठमाडौंमा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १ सय १ रुपैयाँ पुगेको छ भने डिजेल र मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर ८७ रुपैयाँ पर्नेछ।
भारतीय आयल निगमल पठाएको नयाँ खरिद मूल्यसूची अनुसार लागत बढेर आएपछि निगमले इन्धनको मूल्य बढाएको जनाएको छ ।निगमका प्रवक्ता नितिन मणि उपाध्यायका अनुसार हवाई इन्धन र एलपी ग्यासको मूल्य भने यथावत राखिएकाे छ।
हलचल मच्चिने गरि प्रधानमन्त्री ओलीको राजिनामा !
No Comments on हलचल मच्चिने गरि प्रधानमन्त्री ओलीको राजिनामा !
काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपाको स्थायी समिति बैठकमा पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग गरेपछि हलचल मच्चिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्लो कृयाकलाप र अभिब्यक्तिका कारण पार्टीकै शिर्ष नेताहरु ओलीसंग रिसाएका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आइतवार आयोजित मदन भण्डारी स्मृति सभामा आफुले नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरेपछि प्रधानमन्त्रीवाट हटाउन भारतसंग मिलेर चलखेल गरेको अभिब्यक्ति दिएका थिए । आफुहरु माथि प्रधानमन्त्रीले त्यती ठूलो आरोप लगाएपछि नेकपाका नेताहरु रुष्ट भएका थिए ।
बैठकमा उठ्दै नउठेको विषयमा प्रधानमन्त्रीले आफै अनावश्यक टिप्पणी गरेपछि अप्ठेरोमा परेका हुन् । प्रधानमन्त्रीको सो अभिब्यक्तिपछि आजको वैठकमा राजिनामा माग्ने आँकलन सहितको समाचार प्रकाशन भएके थियो । नेकपाका केही नेताहरुले प्रधानमन्त्रीले नै फायर खोलेपछि मंगलवारको बैठकमा उनको राजिनामा माग गर्ने बताएका थिए । नभन्दै अध्यक्ष प्रचण्डले नै प्रधानमन्त्रीको राजिनामा माग गरेका छन् ।
मंगलबारको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डको प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिनुपर्ने प्रस्तावमा बरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधव नेपाल पनि समर्थन जनाएका छन् । उनीहरुले सरकार र पार्टी सञ्चालनमा असफल भएकाले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न माग गरेका हुन्।
बैठकको सुरुमै बोल्न थालेका अध्यक्ष प्रचण्डले नै राजिनामाको कुरा उठाएका थिए । मन्त्यब्यको अन्त्यमा कडा रुपमा प्रस्तुत भएका उनले पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमको व्याख्या गर्दै यस अवधिमा भएका गल्ति कमजोरी औँल्याएका थिए।
त्यसपछि प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार ‘सरकार ढाल्न भारत र नेपालकै केही राजनीतिक शक्ति सक्रिय रहेको भन्ने’ भनाईतिर संकेत गर्दै राजिनामा मागेका थिए । प्रचण्डले बैठकमा भनेका छन् ‘बुधबारको बैठकमै मैले तपाईँबाट सरकार र पार्टी सञ्चालन राम्रो नभएको बताएको हुँ, अहिले फेरि पनि भन्छु राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुस्।’
मंगलवारको बैठकमा आफ्नो राजिनामाको कुरा उठ्ने आँकलन गरेका प्रधानमन्त्री ओली बैठक सुरु हुन अघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न शितल निवास पुगेका थिए । उनी करिब ४० मिनेट सितल निवासमा विताएको बताइएको छ ।
बढ्यो जो’खि’म: काठमाडौंमा एकैपटक १२ जनामा को’रो’ना सं’क्र’म’ण पुष्टि
No Comments on बढ्यो जो’खि’म: काठमाडौंमा एकैपटक १२ जनामा को’रो’ना सं’क्र’म’ण पुष्टि
काठमाडौं । बितेको २४ घण्टामा काठमाडौंमा थप १२ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ ।
जसमा त्रिभुवन विश्वविध्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जनमा गरिएको परीक्षणका क्रममा ४ जना महिला तथा ५ जना पुरुषमा कोरोना संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले बताए ।
त्यस्तै राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा गरिएको परीक्षणका क्रममा २ जना पुरुषमा कोरोना संक्रमण देखिएको हो ।
त्यस्तै पाटन अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा गरिएको परीक्षणमा १ जनामा कोरोना देखिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा गौतमले बताए ।
यसअघि हिजो पहिलोपल्ट उच्च संख्यामा उपत्यकामा संक्रमित थपिएका थिए । काठमाडौंमा ६, ललितपुरमा १ र भक्तपुरमा १ गरी ८ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो । आज एकैपल्ट काठमाडौंमा मात्रै १२ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका कारण जोखिम बढेको बुझ्न सकिन्छ ।
नेपालमा आज (मंगलवार) एकैपटक ३१६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । योसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या १३ हजार ५६४ पुगेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिंगमा मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा. डा. गौतमले नेपालमा बितेको २४ घण्टामा ३१६ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार आज भेटिएका संक्रमितहरु सबैको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको छ भने उनीहरु चिकित्सकको निगरानीमा रहेका छन् । संक्रमण पुष्टि भएकाहरुको सम्पर्कमा रहेकाहरुको कन्ट्याक ट्रेसिङ गर्ने कार्य भईरहेको छ ।
नेपालमा अहिलेसम्म कोरोना भाइरसको कारण २९ जनाको मृत्यु भएको छ ।
नेपालमा अहिलेसम्म ३ हजार १९४ जना कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भएका छन् ।त्यसमध्ये २ हजार ९१७ पुरुष र २७७ जना महिला रहेका छन् ।
पछिल्लो २४ घण्टामा नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनहरुको संख्या ६० रहेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा डिस्चार्ज हुनेहरुमध्ये ९ जना महिला र ५१ जना पुरुष छन्।
नेपालमा हिजो (सोमवार) एकैपटक ५५४ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो ।